Iyada oo ku saleysan 15 sano oo waayo-aragnimo shaqo ee warshadaha lagu koriyo ah, waxaan leenahay taageero farsamo oo dhameystiran si loo dhameystiro noocyada kala duwan ee lagu koriyo.
Ujeedada isticmaalka, ha ahaato aqalka dhirta lagu koriyo ee soo saarista miraha iyo khudradda, aqalka dhirta lagu koriyo ee cilmi baarista dhirta, aqalka dhirta lagu koriyo ee daawashada iyo tamashlaha, ama aqalka dhirta lagu koriyo ee loogu talagalay baahiyaha beerashada shaqsiyeed, waxaan khibrad u leenahay qaabeynta, wax soo saarka iyo dhismaha.
Marka laga hadlayo noocyada aqalka dhirta lagu koriyo, aqalka dhirta lagu koriyo ee madoobaadka, aqalka dhirta lagu koriyo ee caagga ah, aqalka dhirta lagu koriyo ee tunnelka, aqalka dhirta lagu koriyo ee loo yaqaan 'PC sheet', aqalka dhirta lagu koriyo ee muraayadda ah, lagu koriyo qorraxda, waxaan dib u cusbooneysiinnay in ka badan toban nooc oo ah alaabtan.
Injineer kasta wuxuu leeyahay ugu yaraan 10 sano oo khibrad shaqo ah warshadaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Way yaqaaniin halka ay ku yaalliin aqalka dhirta lagu koriyo. Sidaa darteed, barnaamijka aqalka dhirta lagu koriyo ee la jaanqaadaya deegaanka juqraafiyeed ee deegaanka iyo cimilada saadaasha hawada ayaa la qorsheyn karaa.
Guud ahaan, ka dib markay injineeradeenu heleen macluumaad ku filan. Qorshe lagu koriyo oo adiga lagaa doonayo ayaa laguu soo diri doonaa 1 toddobaad gudahood.
Waa maxay sababta dhakhsaha leh. Tani wali waxay ku saleysan tahay khibradeena hodanka ah iyo awooda kala soocida xogta oo qumman.
Bilowga xiriirka aad la leedahay iibiyahayaga, injineeradeenu waxay bilaabeen inay soo farageliyaan mashruucan. Ilaa laga xaqiijinayo qorshaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Si dadka looga caawiyo inay dhisaan aqalka dhirta lagu koriyo ka wanaagsan.
100,000 oo mitir murabac ah naqshadaynta mashruuca lagu koriyo galaas
20,000 mitir murabac oo naqshadaynta mashruuca Greenhouse
60,000 oo mitir laba jibbaaran oo ah nashqad indho-indheyn muuqaal-mashruuc mashruuc koriin ah
naqshad lagu koriyo qaab-dhismeedka birta nalka kala duwan
Ka qalin jabiyay iskuulka maxaliga ah ee dhismaha
Is-barasho inta lagu jiro shaqada iyo helitaanka shahaadada qalin-jabinta
Barashada tikniyoolajiyadda aqalka dhirta lagu koriyo ee Nederland iyadoo noqoshada arday sarrifka ah
Tirada sawirka naqshada